Ama-thermometer e-Gallium: ungayikhetha kanjani engcono kakhulu? | Izindaba zamagajethi
I-Gallium thermometers: ungayikhetha kanjani engcono kakhulu?
U-Ignacio Sala | | Ukuzenzakalela kwasekhaya, Ikhaya
Ithuluzi lokulinganisa lokushisa lokuqala yadalwa nguGalileo Galilei futhi ekuqaleni wabhapathizwa njenge-thermoscope. I-thermoscope yayiyipayipi lengilazi elinesigcilikisha esivaliwe ngasemaphethelweni afakwa enhlanganisweni yamanzi notshwala obushisiwe ukuze ikhuphuke ngeshubhu lapho kwakukhona isikali senombolo.
Kusukela lapho, i-thermometer kaGalileo uGalileo iguqukele ekuvumelaneni nazo zonke izinhlobo zokulinganisa, ngokuba yi-mercury thermometer (eyenziwe nguGabriel Fahrenheit ngo-1714) enye yezinto ezisetshenziswa kakhulu emhlabeni ukukala izinga lokushisa komzimba. Kodwa-ke, ngenxa yobuthi bayo obukhulu, ukwenziwa kwayo akuvunyelwe emazweni amaningi.
Yize abantu abaningi besathembele kuma-thermometer e-mercury ukukala izinga lokushisa komzimba, kuya ngokuya kunzima ukubathola emakethe. Isixazululo esisodwa ukusebenzisa ama-thermometer edijithali, noma kwesinye isikhathi anikeza umuzwa wokuthi isikhathi ngasinye lapho esetshenziswa unikeza isilinganiso esihlukile ngokungafani nama-thermometer endabuko e-mercury.
Uma ama-thermometer edijithali engakugculisi, isixazululo ukusebenzisa ama-thermometer e-gallium, lokhu okuyindlela engcono kakhulu kunaleyo yokuphila konke. Ama-thermometer e-Gallium, njengama-thermometer e-mercury, zibhekwa njengezinembe kakhuluUbubi babo obukhulu isikhathi eside esidingekayo ukuthola isilinganiso esifanele, ngaphezu kokwenziwa ngengilazi, ngakho-ke zibuthaka kakhulu kunoma ikuphi ukuwa okungenzeka.
1 Yini i-gallium
2 Izinzuzo ze-gallium thermometers
3 Isebenza kanjani i-Gallium Thermometers
4 Kwenzekani uma kuphuka i-thermometer ye-gallium
5 Iyiphi i-thermometer yokuthenga
Njengoba ngishilo ngenhla, i-mercury yayeka ukusetshenziswa ekwenziweni kwama-thermometer ngo-2007, lapho i-European Union uyivimbile ngenxa yezinga layo eliphakeme lobuthi hhayi abantu kuphela, kodwa futhi nemvelo.
Esikhundleni se-mercury kuma-thermometer kwakungu-gallium, kunalokho i-galinstane (galinstan ngesiNgisi: gallium, inwanikela futhi yimaninum), i-alloy ye-gallium (68,5%), i-indium (21,5%) ne-tin (10%) enikeza ukunemba okufana ncamashi nalokho esingakuthola kuma-thermometer e-mercury.
I-Gallium esetshenziselwa izitshalo zamandla enuzi ukuzinzisa i-plutonium, ngaphakathi kwezibonakude ukuthola i-neutrinos, ikhona kwezinye izinhlobo zamapaneli elanga nezibuko, ingasetshenziswa ku-aluminium ukukhiqiza i-hydrogen ngokuphendula ngamanzi, isetshenziselwa ukwelapha abantu abane-calcium eyeqile egazini ...
Izinzuzo ze-gallium thermometers
Izinzuzo ze-gallium thermometers cishe ziyafana lezi ebesingazithola kuma-thermometer e-mercury futhi lokho kusebenza kuma-thermometer amaningi angewona awe-digital.
Ukuqina ngokuhamba kwesikhathi. Njengama-thermometer e-mercury, isikhathi se-gallium thermometers asipheli, okungukuthi, sizohlala sisebenza njengosuku lokuqala inqobo nje uma singaphuli.
El ububanzi bephutha kungu-0,1 ° C.
Ngokungafaki i-mercury, kunjalo esimeme imvelo futhi ingabuye isetshenziswe kalula kalula.
Yize kunawo wonke amanani, ngokuvamile, akhona eshibhile kunama-thermometer edijithali.
Ukuhlanza okulula, ngoba ngensipho encane singakhawulela ingilazi.
Isebenza kanjani i-Gallium Thermometers
Ukusebenza kwama-thermometer e-gallium kuyefana nokwamanye ama-thermometer e-mercury. Into yokuqala okufanele uyihlole ngaphambi kokuyibeka endaweni yokulinganisa ukuthi uketshezi olungaphakathi lungaphansi kwama-degree angama-36 ukuyinyakazisa iphindelela ize ibe kulelo zinga.
Ngemuva kwalokho siyibeka endaweni yomzimba lapho sifuna ukukala khona, ngokuvamile emlonyeni, ekhwapheni noma engxenyeni futhi silinde okungenani imizuzu emi-4. Ngokungafani nama-thermometer edijithali alinganisa ngemizuzwana, ama-gallium thermometers (njengama-mercury) adinga imizuzu embalwa ukwenza isilinganiso esifanele.
Lapho sesithole isilinganiso esifanelekile kufanele hlanza indawo yokukala ye-thermometer ngensipho yesandla bese uyinyakazisa kaninginingi kuze kube yilapho i-gallium ingaphansi kwama-degree angama-36 bese uyigcina esimweni esifanele endaweni epholile, enomoya, evikelwe elangeni.
Kwenzekani uma kuphuka i-thermometer ye-gallium
I-Gallium Thermometers zenziwe ngengilaziNgakho-ke, uma kwenzeka ukuwa ngengozi, kungaphuka futhi kungabi nalutho ngokuphelele, kusiphoqe ukuba sithenge entsha.
Mayelana nokuqukethwe ingaphakathi layo, i-gallium ayiyona into enobuthi sengathi yi-mercury eyayikuma-thermometer okuqala akhiqizwa kwaze kwaba maphakathi no-2007 eYurophu.
Uma sinelukuluku lokuthinta i-gallium, lapho siyithola ihlangana nesikhumba izonyamalala ngenxa yombala womzimba. Kwenzeka okufanayo lapho i-thermometer esebenzisa utshwala obunemibala ukwenza izilinganiso zokushisa iphuka. Ngezinsalela ze-thermometer, ekubeni ingilazi, singakwazi ukukusebenzisa kabusha esitsheni esihambelana nokurisayikilisha.
Iyiphi i-thermometer yokuthenga
Ngokungafani ne-mercury thermometer, i-gallium thermometers Akufani konke njengoba ngayinye inikela ngokusebenza okwengeziwe. Uma sibheka i- ama-thermometer amahle kakhulu, kufanele sinake ukuthi yiziphi izici elisinikeza zona nokuthi yini ezenza zehluke kwezinye.
Lapho uthenga i-thermometer ye-gallium, kufanele sikhumbule ukuthi ingilazi ungafaki izinto ezinobuthi nokuthi ayenziwe ngezinto zepulasitiki, ngoba lezi azisinikezi isilinganiso esifanele. Uma futhi kwenziwa ngezinto ezilwa ne-allergenic, kungcono.
Lapho wehlisa izinga lokushisa ukuze uphinde uthathe isilinganiso noma usibuyisele esimweni salo, kufanele sinyakazise i-thermometer. Amanye amamodeli faka uhlelo olubizwa nge- shaker, okuvumela ukuthi inyakaziswe ngendlela esheshayo nenethezekile, igwema ngesikhathi sokwenza umsebenzi ingagxumela emoyeni.
Ububanzi bokulinganisa bawo wonke ama-thermometer iphakathi kwama-35,5 no-42 degrees, ngakho-ke uma sithola amamodeli asinikeza isilinganiso esibanzi, kufanele singabethembi, ngoba izinga lokushisa lomzimba lomzimba ophilayo litholakala kuphela phakathi kwalokhu okuphezulu nokuncane
Esinye isici okufanele sisicabangele lapho sithenga i-thermometer ye-gallium uma sihlanganisa i- lens eyenza kube lula ukufunda izinga lokushisa. Ama-thermometer awakaze abonakale ngokunikela ngesilinganiso esilula ukuwabona ikakhulukazi ngosayizi wawo, ngakho-ke uma ifaka ilensi eyenza ukufunda kube lula ukwaziswa.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » Ikhaya » I-Gallium thermometers: ungayikhetha kanjani engcono kakhulu?
Isizukulwane sesi-4 se-Amazon Echo Dot, ekahle futhi sihle [ISIHLAZIYI]